Pink Tomato: Nkọwa nke kachasị iche iche - Kadinal - 2020
Kasị mma na tebụl gị: tomato tomato
Ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ ahụ, ị ​​nwere ike ịsụ ngọngọ n'otu eziokwu.
A sụgharịrị n'asụsụ Spanish, tomato bụ "ọlaedo apụl".
Mkpụrụ ndị a na-egosipụta aha ha ziri ezi, ma karịsịa - tomato tomato.
N'akụkụ ụfọdụ, ụdị tomato a dị mma karịa ndị ikwu ya - ọbara ọbara tomato.
Ha nwere ọtụtụ ndị na-aṅụ shuga, vitamin B1, B6, C na PP, yana antioxidants na-emepụta ihe - merenụ na lycopene.
Ọdịiche "Ọkụ mmiri"
Ụdị "Pink Flamingo"
Ụdị "Ịhụnanya Mbụ"
Pink Spam Nhazi
Pink Spam bụ ngwakọ nke Bullish Heart iche iche. Osisi determinative, ogologo ogologo.
Mkpụrụ mbụ nwere ike wepụ si bushes na 95 - 100 ụbọchị mgbe germination. Bushes oge ntoju ma mịa mkpụrụ ruo mgbe ntu oyi. Mkpụrụ dị nnọọ ka tomato nke "Bull's Heart" dịgasị iche iche, ya bụ, ha bụ otu ọdịdị na ọdịdị. Ihe dị iche na uto - tomato tomato dị ụtọ.
Na arọ, mkpụrụ osisi ruru 150 - 250 g, ma e nwekwara mkpụrụ osisi ndị nwere ike ibu ihe ruru 1 n'arọ. Ruo n'arọ 20 nke mkpụrụ osisi nwere ike ịnakọta site n'otu mpaghara.
Akwa njem na-aga n'ihu, ma enweghi ike ịgha ụgha ogologo oge mgbe ehichachara. Nke a bụ ngwakọ, ma mbubreyo blight nwere ike imerụ bushes. Ma ndị fọdụrụ n'ime nje na fungi agaghị emetụta Pink Spam iche iche.
mkpụrụ dị elu, mkpụrụ osisi dị oke mma
enwere ọtụtụ ọrịa
nwere ike imetụta site na mbubreyo blight
Nlekọta nke ụdị dị iche iche na-amalite site na seedlings, nke a ghaghị ịtọ na mbido March. Na-elekọta maka ọkọlọtọ nke osisi. Na-agbanye mmiri atọ, mmiri na hardening ga-emetụta n'ọdịnihu bushes.
Mkpa na-eri nri mgbe niile, nke mere na ha ka mma ịnọ ala. A ghaghị ime ihe mgbe ọ bụla ntu oyi kwụsịrị, a ga-eguzobekwa okpomọkụ dị mma. Ọkwọ ụgbọala na griin ha nwere ike ịmalite ịmalite ịbanye n'ime ala. Ọdịda atụmatụ 70x40 cm.
Achọghị ka a na-agbanye aka na osisi ahụ dị mfe. Ikwesiri ijikwa osisi na-egbu egbu megide phytophthora, nke nwere ike ibibi ihe karịrị pasent 65 nke ihe ubi ahụ. Ọ dị mkpa iji mmiri mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ebe ọ bụ na ụda mmiri dị ukwuu, mkpụrụ nwere ike ịgbawa. Ọ bụ iwu na ị ga-enye ụdị nri dịgasị iche iche nke mere na osisi kwesịrị ịmị mkpụrụ.
Ọ dịghị afụ ụfụ nke ala, nke mere na usoro mgbọrọgwụ natara ikuku karị. Ugboro 3 kwa oge, ọ dị mkpa ka e meso bushes ndị ahụ na ọgwụ ndị na-egbu egbu na ọgwụ garlic ka mmiri wee ghara ibute ọrịa.
Nke a na tomato bụ nke na-ajụ n'oge, ripens na 105 - 110 ụbọchị.
Osisi ndị na-ebu osisi, dị nnọọ ala (ruo 60 cm).
Mkpụrụ osisi ndị dị nfe, anụ ahụ, pink na agba, na uka na-enweta ruo 150 g.
Nrụpụta ọrụ na-eme ka 3 - 4 n'arọ si n'otu ohia.
Nri nke mkpụrụ osisi ahụ dị mma. Osisi ndị ahụ na-eguzogide ọgwụ nje ụtaba, mana enwere ike imebi site na mbubreyo blight. A na-ejikarị ya eme ihe na salads.
ezi mkpụrụ uto
nwere ike mebie site na blight
A na-eto eto osisi. A na-akasị osisi kachasị mma na March - April. Mkpụrụ osisi na-eto eto kwesịrị ịmịlite mgbe ọ na - esite na 1 - 2. Ọ ka mma ị na-eto eto na peat, nke nwere ike ịbanye na saplings.
Site na oge ntuputa, ọ ga-ewe ihe dị ka ụbọchị 40 tupu ị na-ebugharị osisi ndị ahụ na-adịgide adịgide. Ka osisi wee gbanye mgbọrọgwụ ngwa ngwa, ọ dị mkpa iji dozie ha ka ha na-esi ike site na ịkụda na iwelata. Ihe akuku akuku bu ihe di iche (40x60 cm, kwa 1 sq. M. 7 - 8 seedlings nke obula).
Ụdị dịgasị iche iche na-eguzogide ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe agbanwe, ya mere ọ dị oke nlekọta na nlekọta. Na-achọ mmiri na-ekpo ọkụ mgbe niile, ịtọ ala, nakwa ịkọ ala.
A ghaghị iji nri fatịlaịza na ọgwụ na-emepụta nri dịka nri. Ọ dịghị mkpa a garter. Ọ bụ ihe na-achọsi ike iji tuo. N'ihi ọtụtụ ndị na - eguzogide ọrịa, ọ dị mkpa ka ị na - emeso tomato ndị a mgbe nile ka osisi ghara ịrịa ọrịa.
Sredneranny ngwakọ, ga-chara n'onwe na 110 - 120 ụbọchị mgbe germination nke sunflower osisi. Osisi nke ohia di ike; otutu akwukwo di na osisi. Mkpụrụ dị gburugburu, mana site na elu dị elu, agbacha acha uhie uhie, oke (ibu ruo 300 g), na-enwe ezigbo uto.
Ọfụma na-akwado njem, okpomọkụ, anaghị agbawa. A na-ebute ọrịa site n'ọtụtụ ọrịa, mana enwere ike ịnweta blight.
mma mkpụrụ osisi
na-eguzogide ihu igwe, njem
nwere ike ibute ọrịa
A ghaghị ịgha mkpụrụ ahụ ụbọchị 65 tupu akuku n'ala (nke dị na March). Nlele dị ka atụmatụ. Uwe elu dị iche iche na ndepụta zuru ezu nke nri. Ịkụzi seedlings anaghị afụ ụfụ.
Na mmalite akuku mkpa nkwado maka bushes. Ihe dịgasị iche iche na-achọpụta, n'ihi ya ị nwere ike ịkụ mkpụrụ bushes tightly, 7 - 9 seedlings ga-eji nwayọọ nwayọọ na 1 square mita.
Nnukwu unpretentious iche iche. Mmiri nke osisi dị iche iche kwesiri ịbụ otu ihe ahụ dị iche iche. A ghaghị ime mmiri na igwe okpomọkụ n'oge ọ bụla, mana enwere ike inwe obere nkwụsịtụ.
Dị mkpa ịba mmiri mgbe nile osisi dị iche iche dị iche iche nke fatịlaịza ka mkpụrụ osisi ahụ dị ụtọ na tọrọ ụtọ. Ọgwụgwọ nke bushes na phytophthorosis ga-enye aka na njikere pụrụ iche nke nwere ọla kọpa n'ime mejupụtara.
Ọ na-atọ ụtọ ịgụ banyere ụdị tomato dị iche iche na mpaghara Moscow
Ngwakọ. Ogologo oge (110 - 115 ụbọchị).
Osisi a na-egosi na ọ dị elu 1.5 - 2 m.
Mkpụrụ osisi oblong dị ka plums, pink, na uru dị arọ 0,1 - 0,2 n'arọ, na-atọ ụtọ uto.
A na-eji ya eme ihe.
Nagide mfe ihu igwe.
Ọrịa agaghị emetụta ya.
nri uto mara mma
iguzogide ojoo ojoo na oria
Mkpụrụ nke ụdị dịgasị iche iche a ga-etolite dị ka iwu ndị a na-emebu. Iji nwekwuo ogo nke iguzogide seedlings nke a dịgasị iche iche na ihu igwe dị njọ, ọ bụ na-achọsi ike ikpughe ndị seedlings na ala okpomọkụ.
Na-eri nri seedlings anaghị afụ ụfụ. Ịgha mkpụrụ na - - 3 - 4 seedlings kwa mpaghara mpaghara. Na bushes dị mfe, ọkacha mma mgbe ọdịda kpoo ome na nso seedling ma tie ohia na nkwado 5-6 ụbọchị mgbe akuku.
N'ihi na ọ dị mfe, ilekọta ihe ndị a agaghị abụ ihe dị oke nsogbu. Mmiri na-ekpo ọkụ n'oge mmiri na-ekpo ọkụ, ịtọ ala ahụ ma mulching ya ga-emetụta oke owuwe ihe ubi n'ọdịnihu. A naghị egbu osisi ndị ahụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa itinye osisi ahụ ma kee ha na trellis.
Ripens ngwa ngwa - maka 95 - 100 ụbọchị. Achọpụtakarị mkpụrụ osisi nke 60 - 70 cm. Mkpụrụ osisi gbara gburugburu, nke dị nro n'elu, utu, ụtọ, ibu ruru 300 - 400 g.
Tomato adịghị agbawa, ọrịa adịghị emetụta ya. Ọdịdị dị elu.
nri ọma ma buru ibu
nkwenye na ọrịa
Enweghị ike ịmata ụkọ
Ịgha mkpụrụ dị mkpa iji mepụta na March. E nwekwara ihe ọzọ: ọ bụrụ na ihu igwe dị n'ógbè gị dị ọkụ karịa ka ọ dị mma, mgbe ahụ, a ga-akụ mkpụrụ ahụ ozugbo, ma ọ bụrụ na mpaghara ahụ dị oyi, i kwesịrị ịmalite site na seedlings.
Ezigbo afọ nke seedlings n'oge akuku ga-abụ 50 - 55 usen. Ala maka ụdị dịgasị iche iche kwesịrị ịbụ ìhè, kama ọ na-eme nri. Ndị dịgasị iche iche na-achọpụta, n'ihi ya ị nwere ike akụ bushes tightly, 5 6 bushes kwa square mita. mita
Ụka ahụ adịghị mma na ịhapụ. Enwere ike iguzogide obere ọkọchị nke nwere ike ịdakwasị na mmiri mmiri. A ghaghị ịtọhapụ ala mgbe niile ka ahihia wee ghara ịpụta, yana ịme ka ikuku oxygen banye na mgbọrọgwụ nke bushes. Iji tie ya na osisi umu osisi adịghị mkpa.
O yiri ka ọtụtụ ndị na Mazarin dịgasị iche bụ ụdị tomato tomato, ma ọ bụghị. "Mazarin" - dị iche iche, mkpụrụ ya jiri ya tụnyere mkpụrụ nke "Bull Heart".
Ụdị dịgasị iche iche nwere oge dị njọ, ya bụ, mkpụrụ osisi ahụ ga-adị njikere na 110 - 115 ụbọchị mgbe seedlings pụta. Ahịa ndị na-adịghị mma, na nchịkwa ụlọ na-eto eto ruo mita 2.
Mkpụrụ osisi na-adị, na-eto eto na-acha, na-acha odo odo, nke kachasị mma mkpụrụ osisi nwere ike ịdị kilo 0.8.
Tomato nke a dịgasị iche iche na-atọ ụtọ. Enwere ike iji ya maka nri nri, nakwa maka ịkwa ụgbọ mmiri.
Ụdị dịgasị iche iche bụ ihe na-achọsi ike ka ọ na-eto eto na ụlọ griinụ, nke mere na tomato ndị a gosipụtara onwe ha. A ghaghị ịgha mkpụrụ n'oge ngwụsị February ma ọ bụ mmalite March. A na-eme ihe ndị a na-emepụta ma na-eme nri nke saplings dịgasị iche iche na tomato ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa iji dochie mkpụrụ osisi ahụ, nke bụ 2 - 3 seedlings kwa 1 sq.
A chọrọ ọkwa a ọ dị mkpa ka ị mụọiji mepụta ụzọ mgbapụ. Ịgbara tomato ndị a dị iche iche. Tupu okooko osisi, ọchịchị mmiri na-eme ka ọ bụrụ ihe nkịtị, ma n'oge okooko na mkpụrụ osisi, ọ dị mkpa iji mmiri na-agba mmiri naanị mgbe ọ dị mkpa.
Ọzọkwa mgbe ị na-atụgharị ịkwesịrị iwepu brushes ọzọ, anọ ga-ezu. Fertilizing bushes nke a dịgasị iche iche kwesịrị ịbụ mgbe nile, ma mgbe ahụ, mgbe ovary na-guzobere, ọ dị mkpa ka magnesium sulfate.
Ụdị dịgasị iche iche na osisi ogologo (ruo 1.8 m). Kwesịrị ekwesị ma abụọ greenhouses na ala. Oge na-aga n'ihu na-esote ihe dị iche - 110 - 115 ụbọchị.
Mkpụrụ ndị ahụ buru ibu, na-eru ihe ruru 0,6 n'arọ, na ọdịdị dị ka obi, acha ọbara ọbara-agbacha agba na agba ojiji na-acha ọcha. Nri tomato nwere mkpụrụ osisi ole na ole, shuga na-ejupụta na uto. Ọzọkwa, mkpụrụ osisi ahụ dị ezigbo ụtọ. Na aka na-eto site na 5 ruo 9 mkpụrụ osisi.
Mkpụrụ ahụ dị elu ma dị ihe dị ka kilogram 15 kwa square mita. Echere na iguzogide phytophthora.
adịghị emetụta ụbịa blight
Oge kacha mma ị ga-ede akwụkwọ ga-abụ njedebe March - mmalite nke Eprel. Ihe omimi nke ịtọ osisi bụ 3 cm Tupu akuku, a ghaghị ịgha mkpụrụ osisi na potassium permanganate maka disinfection. Mgbe seedlings bụ 55 - 70 ụbọchị, ọ nwere ike kụrụ n'ala na mmalite June. Nri atọ na anọ kwesịrị ịdaba na mita mita anọ, atụmatụ nhazi ahụ ga-abụ 70x30x40 cm.
Mmiri nke dịgasị iche iche kwesịrị ịdị na-eme mgbe niile, na mmiri ọkụ. Jide n'aka na ị na-eri tomato ndị a, nakwa na ị ga-agbado nkwado ahụ. Ọ dịkwa mma iji wepụ stepsons. N'agbanyeghị na iguzogide phytophthora, ọ dị mkpa ka e jiri ọgwụ na-adịghị ike na-emeso ndị na-arịa ọrịa ọgwụ.
Tomato Pink ga-abụ ezigbo ihe ịchọrọ. Ị nwere ike ịhọrọ mgbe niile maka bushes ndị a di na nwunye na akwa.